Efteling n'oge mkpọchi - Thrilltalk.com
Home/Okwu ogige/Efteling n'oge mkpọchi
0 21 Nkeji 1
Urua, Oge oyi 2020. Ogige ahụ ga-emechi ụzọ ya, ogige ahụ adị jụụ ugbu a. N'ụzọ dị mma, ngalaba ahịa na-enyere aka ogige akụkọ ifo anyị site n'oge a na ụfọdụ foto mara mma nke ogige ntụrụndụ na ebe a gbahapụrụ agbahapụ. Ogige ahụ nwere olileanya imeghe ọnụ ụzọ ámá ọzọ na Jenụwarị 20, mana nke ahụ dabere kpamkpam na onu ogugu enwere oria na nha nke kabinet.
Efteling na mkpọchi foto
Don'tnweghị anụ Witte Wieven na-abụ abụ na Baron 1898.
Oche ndị ahụ na Zweefmolen na-efegharị n’ikuku.
Fairytale osisi na-ewe ụra mara mma.
Enweghị ndị na-ejide mkpụrụ ego na Herautenplein ruo nwa oge.
The efu steepụ nke Ihi ụra Mma Castle.
Olileanya ọ nwere ike Efteling nabata ndị ọbịa ọzọ site na 20 Jenụwarị 2021. Ogige ntụrụndụ na-enweghị ihe ọ bụla na-atọ ụtọ na-adịkarị ụtọ karịa ogige ntụrụndụ na ebube ya niile na ndị ọbịa na-ekpori ndụ ụbọchị ha.
Na-agbatị foto efu mkpọchi ogige ntụrụndụ ogige akụkọ ifo
Waterpark Rulantica ga-agbasa na asọmpi slide si ProSlide